आइतबार सेप्टेम्बर 5, 2021 |
आइतबार सेप्टेम्बर 5, 2021
विषय — विषय- मान्छे
वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: भजनसंग्रह 133 : 1
“"जब दाज्यू-भाइहरू एक साथ मिलेर बस्छन त्यो अति नै राम्रो र आनन्दपूर्ण हुँदछ।"”
उत्तरदायी पढाइ: उत्पत्ति 1 : 26, 27	•	एफिसी4: 4-6
4 शरीर एउटै छ र आत्मा एउटै छ। आशा पनि एउटै छ जसकोलागि परमेश्वरले तिमीहरूलाई बोलाए।
5 एउटै प्रभु, एउटै विश्वास र एउटै बप्तिस्मा छ।
6 परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ जो सबका पिता हुनुहुन्छ। उहाँ सर्वोपरी हुनुहुन्छ, हरेक कुराबाट काम गर्नु हुन्छ अनि हरेकमा हुनुहुन्छ।
1. गलाती3: 28
28 अब ख्रीष्टमा कुनै मानिस यहूदी अथवा ग्रीक , कमारा अथवा फुक्का अनि स्त्री अथवा पुरुषमा पनि कुनै भिन्नता भएन। किनभने ख्रीष्ट यशूमा तिमीहरू सब एक हौ।
2. इजकिएल 1 : 1 (ला भयो) (त्यो),3(ला पुजारी) (र)
1 अब यो पास गर्न आयो... कि स्वर्ग खोलिएको थियो, र मैले भगवान को दर्शन देखे।
3 परमप्रभुको वचन इजकिएल पुजारीकहाँ स्पष्ट रूपले आयो, ... अनि परमप्रभुको हात उहाँमाथि थियो।
3. इजकिएल2: 2-4 (ला 1st .)
2 जब उहाँले मसित बात गर्नुभयो, तब उहाँको आत्मा म भित्र पस्यो र मलाई खडा गरायो। अनि मैले त्यस मानिसलाई मसित कुरा गरेको सुनें।
3 उहाँले मलाई भन्नुभयो, “मानिसको छोरो, म तिमीलाई इस्राएलको परिवारसँगकेही भन्नका निम्ति पठाउँदैछु। तिनीहरू बागीहरूको जाति हुन्। लगातार मेरो विरूद्ध बागी भएकाछन् तिनीहरूका पिता-पुर्खाहरू पनि मेरो विरूद्धमा बागी भएको थिए। तिनीहरू र तिनीहरूका पिता-पुर्खाहरूले मेरो विरूद्धमा अपराधहरू गरे अनि आज सम्म तिनीहरू त्यसै गर्दैछन्।
4 तर तिनीहरू एकदमै हठी छन्। तिनीहरू कठोर हृदयका छन्।
4. इजकिएल3: 27
27 तर जब म तिमीसित कुरा गर्छु त्यसबेला तिमीलाई म बोल्ने बनाउँनेछु। तर तिमीले भन्नु पर्छ, परमप्रभु हाम्रा मालिकले यी कुराहरू भन्नु हुन्छ। यदि कसैले सुन्न चाहन्छ भने उसले सुनोस्। यदि होइन भने, मलाई तिरस्कार गरोस्। किनभने तिनीहरू विध्वंशकारीहरू हुन्।
5. इजकिएल 11 : 16-20
16 यसकारण मानिसहरूसँग भन परमप्रभु हाम्रा मालिक भन्नु हुन्छ, ‘यो साँचो हो कि मैले आफ्नो मानिसहरूलाई टाढो भूमिहरूमा जानको निम्ति बाध्य गरें। मैले नै तिनीहरूलाई धेरै देशहरूमा तितर-बितर पारें। ती भूमिहरूमा म तिनीहरूको निम्ति केही समय मन्दिर हुनेछ।
20 तब तिनीहरूले मेरो विधिहरू पालन गर्नेछन्। तिनीहरूले मेरो नियमहरू पालन गर्नेछन्, तिनीहरूले त्यो काम गर्नेछन् जुन म गर्न लगाउँछु। तिनीहरू साँच्चै मेरो प्रजा हुनेछन् अनि म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु।
6. यूहन्ना 8 : 12 (ला येशू)
12 तब येशू बोल्नुभयो...
7. यूहन्ना 10 : 30
30 पिता र म एकै हौं।
8. यूहन्ना 15 : 1-17
1 येशूले भन्नुभयो, म साँचो दाखको बोट हुँ, मेरो पिता माली हुनुहुन्छ।
5 म दाखको बोट हुँ र तिमीहरू त्यसका हाँगाहरू हौ। यदि जो कोही ममा रह्यो भने त्यसले धेरै फल दिनेछ। किनभने म बिना तिमीले केही गर्न सक्तैनौ।
7 यदि तिमीहरू ममा रह्यौ र मेरो वचनहरू तिमीहरूमा रह्यो भने तब तिमी जे पनि चाहन्छौ माग अनि त्यो तिमीलाई दिइनेछ।
9. एफिसी4: 1-3, 13-16, 23, 24, 31, 32
1 मकैदमा छु किन कि म प्रभुको हुँ। परमेश्वरले तिमीहरूलाई उनका मानिस भएर जीउन चुन्नु भयो। अब म तिमीहरूलाई परमेश्वरका मानिस भएर कसरी जीउनु पर्छ त्यो बताउछु।
2 सँधै नम्र र कोमल बन। धैर्य बन र आपस्तमा प्रेम पूर्वक रह।
3 आत्मा मार्फत तिमीहरू शान्तिपूर्क एक-अर्कामा सम्बन्धित छौ। शान्तिको बन्धनले यस सम्बन्धलाई अटूट राख्ने भरसक कोशिश गर।
13 हामी सबै एउटै विश्वासमा नबाँधिउञ्जेल, परमेश्वरको पुत्रलाई पूर्णरूपले नचिनुञ्जेल, हामी परिपक्क मानिस नबनिउञ्जेल, हामी ख्रीष्ट जस्तै उन्नत नहुञ्जेल र उहाँको पूर्णता प्राप्त नगरूञ्जेल यो काम गरि नै रहनुपर्छ।
14 तब हामी नानीहरू जस्तो हुने छैनौ। हामी छालमा जहाजले यता र उता छल्काइएका मानिसहरू जस्ता हुने छैनौं। हामी प्रत्येक नयाँ शिक्षाद्वारा प्रभावित हुने छैनौं जसले हामीलाई धोका दिने प्रयास गर्छ। ती मानिसहरूले चलाकी गर्छन् र मानिसहरूलाई भूल बाटामा तान्न हर प्रकारको चेष्टा गर्छन्।
15 तर, हामी प्रेमपूर्वक सत्य बोल्छौं। तर हामी हर तरहले ख्रीष्ट जस्तै नहुञ्जे बडिरहनेछौं। ख्रीष्ट शिर हुनुहुन्छ।
16 र हामी शरीरको प्रत्येक अंग एक-अर्कामा जोडिएकोछ र शरीरको जोडनीले एक गरेको छ। प्रत्येक अंगले आ-आफ्नै काम गर्छ। अनि यसैले सम्पूर्ण शरीर विकास गर्छ र प्रेममा दृढ हुन्छ।
31 तितोपना, रिस र आवेग त्याग कहिल्यै रिसमा नचिच्याउ र अर्काको निन्दा नगर। कुनै प्रकारको कुकर्म कहिल्यै नगर।
32 आपसमा दयालू र कृपालु बन। परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा दिए जस्तै तिमीहरूले पनि एक-अर्कालाई क्षमा देऊ।
त्यहाँ एक मात्र सृष्टिकर्ता र एक सृष्टि छ। यो सृष्टि आध्यात्मिक विचारहरु र उनीहरुको पहिचान को खुलासा, जो अनन्त मन मा अँगालेका छन् र सधैं प्रतिबिम्बित हुन्छन्। यी विचारहरु अनन्त बाट अनन्त सम्म को दायरा हो, र उच्चतम विचारहरु परमेश्वरका छोराहरु र छोरीहरु हुन्।
2. 515 : 21 (मान्छे)-24
मानिस भगवान को छोराहरु र छोरीहरु - सबै विचारहरु को लागी पारिवारिक नाम हो। भगवानले दिनुहुने सबै उहाँको अनुरूप चल्छन्, भलाई र शक्ति प्रतिबिम्बित।
येशूले शरीरको कुनै सम्बन्ध स्वीकार गर्नुभएन। उसले भन्यो: "पृथ्वीमा कसैलाई तिम्रो बुबा नबनाउनुहोस्: किनकि तिम्रो बुबा एक हुनुहुन्छ, जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ।" फेरी उसले सोध्यो: "मेरी आमा को हो, र मेरा भाइहरु को हुन्," यसको मतलब यो हो कि उनीहरु उसको बुबाको इच्छा पूरा गर्छन्। हामीसँग उसको बुबाको नाम बाट कुनै पनी मान्छे बोलाएको कुनै रेकर्ड छैन। उहाँले आत्मा, भगवान, एकमात्र सृष्टिकर्ता, र यसैले सबै को पिता को रूप मा मान्यता दिनुभयो।
ख्रीष्ट आत्मा हुनुहुन्थ्यो जसलाई येशूले आफ्नो बयानमा निहित गर्नुभयो: "म बाटो, सत्य र जीवन हुँ;" "म र मेरो बुबा एक हौं।" यो ख्रीष्ट, वा मानिस येशू को ईश्वरत्व, उहाँको ईश्वरीय प्रकृति थियो, ईश्वरत्व जो उनलाई एनिमेटेड।
बिभिन्न भाषाहरु मा मानिस शब्द को केहि समकक्ष निम्न छन्। स्याक्सन मा, मानव जाति, एक महिला, जो कोही; वेल्श मा, कि जो माथि उठ्छ, - प्राथमिक भावना छवि, रूप हो; हिब्रू मा, छवि, समानता; आइसल्याण्डिक मा, दिमाग। निम्न अनुवाद आइसल्याण्डिक बाट हो: -
र परमेश्वरले भन्नुभयो, आउनुहोस् हामी मानिसलाई हाम्रो मन र हाम्रो समानता अनुसार बनाऔं, र परमेश्वरले मानिसलाई उसको मन पछि बनाउनुभयो; भगवानको दिमाग पछि उहाँ उहाँलाई आकार, र उहाँले तिनीहरूलाई पुरुष र महिला आकार।
6. 524 : 17-27 (ला ,)
एउटै आदेशको साथ, मनले पुरुष र महिला दुबैलाई मानिस बनाएको थियो। तब कसरी एक भौतिक संगठन मानिस को आधार बन्न सक्छ? कसरी गैर बुद्धिमानी मन को माध्यम बन्न सक्छ, र त्रुटि सत्य को उद्घोषक हुन सक्छ? सामग्री आत्मा को प्रतिबिम्ब हैन, अझै सम्म भगवान आफ्नो सृष्टि मा प्रतिबिम्बित हुनुहुन्छ। के यो उहाँको सृष्टि को लागी वास्तविक वा अव्यावहारिक छ? के यो सत्य हो, वा यो मानिस र भगवान को बारेमा झूट हो?
यो झुट हुनुपर्छ,
जसरी मर्त्युले एक भन्दा बढी मन, एक भन्दा धेरै भगवान छ भन्ने भ्रम त्याग्छन्, भगवान को समानता मा मानिस प्रकट हुनेछ, र यो शाश्वत मानिस त्यो समानता मा कुनै भौतिक तत्व शामिल हुनेछ।
एक सामाग्री को रूप मा, सैद्धान्तिक जीवन आधार अस्तित्व को एक गलतफहमी को रूप मा पाईन्छ, आध्यात्मिक र ईश्वरीय सिद्धान्त मानिस को सोच मा बिहानी र यो "जहाँ साना बच्चा थियो,"-एक नयाँ को जन्म को लागी नेतृत्व गर्दछ विचार, हुनुको आध्यात्मिक भावना र जीवन के समावेश छ को। यस प्रकार सारा पृथ्वी सत्य द्वारा यसको प्रकाश को पिनियन मा रूपान्तरित हुनेछ, त्रुटि को अन्धकार को पीछा।
मानव विचार आफैंलाई आत्म-लागू भौतिकता र बन्धन बाट मुक्त हुनुपर्छ।
8. 399: 3-10, 23-28 (ला 2nd.)
तपाइँ भन्नुहुन्छ कि केहि सामाग्री संयोजन रोग उत्पादन; तर यदि भौतिक शरीरले रोग निम्त्याउँछ भने, के पदार्थले के कारणले उपचार गर्न सक्छ? नश्वर दिमागले औषधि तोक्छ र यसलाई प्रशासित गर्दछ। नश्वर दिमाग व्यायाम योजना बनाउँछ र केहि गतिहरु को माध्यम बाट शरीर राख्छ। कुनै ग्यास्ट्रिक ग्याँस जम्मा, एक स्राव र न संयोजन काम गर्न सक्छन्, अलग नश्वर विचार, उर्फ नश्वर मन को कार्य बाट।
वैज्ञानिक रुपमा भन्नु पर्दा, त्यहाँ कुनै नश्वर दिमाग छैन जसबाट भौतिक विश्वास बनाउन को लागी, भ्रम बाट वसन्त। यो गलत नाम दिमाग एक इकाई होइन। यो मात्र कुरा को एक गलत अर्थ हो किनकि पदार्थ समझदार छैन। एक मन, भगवान, कुनै नश्वर राय समावेश गर्दछ। सबै कि वास्तविक छ यो अमर मन मा शामिल छ।
जब हामी बुझ्छौं कि त्यहाँ एक मन छ, हाम्रो छिमेकीलाई माया गर्ने ईश्वरीय कानून आफैलाई खुलाइएको छ; जबकि धेरै शासक दिमाग मा एक विश्वास एक मन, एक भगवान को लागी मानिस को सामान्य बहाव बाधा छ, र मानव सोच विपरीत च्यानलहरु मा नेतृत्व गर्दछ जहाँ स्वार्थ शासन गर्दछ।
10. 112 : 16-21 (ला ख्रीष्टको विचार)
क्रिश्चियन विज्ञान मा अनन्त बाट एक सिद्धान्त र यसको अनन्त विचार आउँछ, र यो अनन्त संग आध्यात्मिक नियम, कानून, र उनीहरुको प्रदर्शन, जो, महान दाता जस्तै, "उस्तै हिजो, र आज, र सधैंभरि छन्" आउँछ। यस प्रकार को लागी उपचार को ईश्वरीय सिद्धान्त र ख्रीष्ट विचार हो ...
ल को गडा, बहिरा, गूंगा, अन्धा, बिरामी, कामुक, पापी, म उनीहरुको आफ्नै विश्वासको दासत्व बाट र फिरऊनहरुको शैक्षिक प्रणाली बाट बचाउन चाहन्छु, जो आज, पहिले को रूप मा, पकड इस्राएलका छोराछोरी बन्धनमा।
मानिसको दासत्व वैध छैन। यो बन्द हुनेछ जब मानिस आफ्नो स्वतन्त्रता को विरासत मा प्रवेश गर्दछ, भौतिक इन्द्रियहरु मा उसको ईश्वर दिइएको प्रभुत्व। मर्नेहरु कुनै दिन सर्वशक्तिमान ईश्वर को नाम मा आफ्नो स्वतन्त्रता दाबी गर्नेछन्। तब उनीहरु दिव्य विज्ञान को समझ को माध्यम बाट आफ्नो शरीर लाई नियन्त्रण गर्नेछन्। आफ्नो वर्तमान विश्वास छोडेर, उनीहरु आध्यात्मिक वास्तविकता को रूप मा सद्भाव को मान्यता र भौतिक असत्य को रूप मा कलह हुनेछ।
मानिसको अधिकार को चिन्ता, हामी सबै दमन को विनाश को पूर्वानुमान गर्न असफल हुन सक्दैनौं। दासत्व मानिसको वैध राज्य होइन। परमेश्वरले मानिसलाई स्वतन्त्र बनाउनुभयो। पावलले भने, "म स्वतन्त्र जन्मिएको थिएँ।" सबै पुरुष स्वतन्त्र हुनुपर्छ। "जहाँ प्रभुको आत्मा हुनुहुन्छ, त्यहाँ स्वतन्त्रता छ।" प्रेम र सत्य मुक्त, तर दुष्ट र त्रुटि कैद गर्न नेतृत्व।
क्रिश्चियन विज्ञान स्वतन्त्रताको स्तर उठाउँछ र रुन्छ: "मलाई पछ्याउनुहोस्! येशूले बाटो देखाउनुभयो। संसारका नागरिकहरु, "भगवान को बच्चाहरु को गौरवशाली स्वतन्त्रता," स्वीकार गर्नुहोस् र स्वतन्त्र हुनुहोस्! यो तिम्रो ईश्वरीय अधिकार हो।